Barnard College ၏ရုပ်ပုံများ: ကျောင်းပရဝုဏ်ဓာတ်ပုံလှည့်လည်
Barnard College မှာဓာတ်ပုံလှည့်လည်
Barnard ကောလိပ်ကျောင်းပရဝုဏ်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Barnard College မှာအထက်မန်ဟက်တန်၏ Morningside မြင့် neighboorhood တည်ရှိသောမိန်းမတို့အဘို့အလွန်ရွေးချယ်လစ်ဘရယ်အနုပညာကောလိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်လမ်းပေါ်မှာဖြတ်ပြီးတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပါသည်, ထိုသူနှစ်ယောက်ကျောင်းများအများအပြားအရင်းအမြစ်များကိုမျှဝေပါ။ Barnard နှင့်ကိုလံဘီယာကျောင်းသားများ, နှစ်ဦးစလုံးကကျောင်းတွေမှာအတန်းယူ 22 တွဲဖက်စာကြည့်တိုက်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမျှဝေ, နှင့်ပူးတွဲအားကစားလုပ်ငန်းစုအတွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ယခုအသုံးမဝင်တော့ဟားဗတ် / Radcliffe ဆက်ဆံရေးမျိုးနှင့်မတူဘဲ, ကိုလံဘီယာနှင့် Barnard သီးခြားဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များ, ဝန်ခံချက်ရုံးများနှင့်ဝန်ထမ်းများရှိသည်။
2010 ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ - 2011 ခုနှစ်ဝင်ခွင့်များသံသရာ, လျှောက်ထား့ 28% Barnard မှလက်ခံခဲ့သည်ခဲ့သည်, သူတို့ကောင်းစွာပျမ်းမျှအားအထက် GPAs နှင့်စမ်းသပ်မှုရမှတ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကောလိပ်ရဲ့အများအပြားအားသာချက်များကြောင့်ငါ၏စာရင်းများအတွက်လွယ်ကူသောရွေးလုပ် ထိပ်တန်းအမျိုးသမီးကောလိပ် , ထိပ်တန်းအလယျပိုငျးအတ္တလန္တိတ်ကောလိပ်များ နှင့် ထိပ်တန်းနယူးယောက်ကောလိပ်များ ။ က Barnard သို့ရဖို့ကြာဘယ်အရာကိုမြင်ဖို့, ထုတ်စစ်ဆေး Barnard College မှာပရိုဖိုင်း ။
အဆိုပါကျောင်းဝင်းကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်နှင့်ဘရော့ဒ်ဝေးအပေါ် 116 အနောက်လမ်းနှင့်အနောက် 120th Street, အကြားထိုင်တော်မူ၏။ အဆိုပါပုံရိပ်အထက်တွင် Barnard ခန်းမနှင့် Sulzberger မျှော်စင်ဆီသို့ဦးတည်တောင်ဘက်ရှာဖွေနေ Lehman မြက်ခင်းထဲကနေယူခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ရာသီဥတုစဉ်အတွင်းသင်မကြာခဏကျောင်းသားများကိုလေ့လာနေနှင့်မြက်ခင်းပေါ် socializing ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, များပြားပါမောက္ခအပြင်ဘက်လူတန်းစားကိုင်ထားပါ။
Barnard ကောလိပ်မှာ Barnard ခန်းမ
Barnard ကောလိပ်မှာ Barnard ခန်းမ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
သင်ပထမဦးဆုံး Barnard ကောလိပ်မှအဓိကတံခါးအတွင်းသို့ဝင်သောအခါ, သငျသညျ Barnard ခန်းမများ၏ pillared မျက်နှာစာအားဖြင့်ရင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ကြီးမားသောအဆောက်အဦကောလိပ်မှာလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ကျယ်ပြန့ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သငျသညျစာသင်ခန်း, ရုံးများ, စတူဒီယိုနှင့်ဖြစ်ရပ်အာကာသတွေ့ပါလိမ့်မယ်အတွင်းပိုင်း။ အမျိုးသမီးများအပေါ်သုတေသနများအတွက် Barnard Center ကပထမဦးဆုံးကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါအဆောက်အဦကိုလည်း Barnard ရဲ့အားကစားအဆောက်အဦမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ အောက်ပိုင်းအဆင့်အထိတွင်ရေကူးကန်, လမ်းကြောင်း, အလေးချိန်အခန်းတစ်ခန်းနှင့်အားကစားရုံပါပဲ။ ကျောင်းသားများကိုလည်းသုံးခွင့်ရှိသည် ကိုလံဘီယာရဲ့အားကစားအဆောက်အဦ ။ Barnard ကျောင်းသားများကိုလံဘီယာ / Barnard အားကစား Consortium အတွက်ယှဉ်ပြိုင်, ဤဆက်ဆံရေးမျိုးဟာ NCAA ရတိုင်းဗြဲ Barnard အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြောင်း Barnard နိုင်ငံအတွင်းတစ်ခုတည်းသောအမျိုးသမီးကောလိပ်ကျောင်းတဆယ်ခြောက် intercollegiate အားကစားကနေရှေးခယျြနိုငျစေသည်။
Barnard ခန်းမ၏အနောက်မြောက်ဘက်ထောင့်ချိတ်ဆက် Barnard ခန်းမ Dance နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကောလိပ်အားကြီးသောကခုန်အစီအစဉ်ကိုရှိပြီးယခုပရော်ဖက်ရှင်နယ်သိပ်ပြီးအဖြစ်အလုပ်လုပ်သူအများအပြားကျောင်းသားများအတွက်ဘွဲ့ရခဲ့သည်။ အကအခုန်လည်းအမြင်အာရုံပြီးပါကနှင့် interdisciplinary အခြေခံအုတ်မြစ်သင်တန်းများ Barnard ရဲ့ "သိမှတ်ကြလော့၏ကိုးနည်းလမ်းများ" ၏အနုပညာအစိတ်အပိုင်းဖျော်ဖြေနေသောကျောင်းသားများအတွက်လေ့လာမှုတစ်ခုလူကြိုက်များဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။
Barnard ကောလိပ်မှာ Lehman ခန်းမ
Barnard ကောလိပ်မှာ Lehman ခန်းမ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
သငျသညျ Barnard တက်ရောက်ရန်လျှင်, သင် Lehman ခန်းမထဲမှာအချိန်အများကြီးဖြုန်းပါလိမ့်မယ်။ အဆောက်အဦး၏ပထမဦးဆုံးသုံးထပ်အိမ် Wollman စာကြည့်တိုက်မှ Barnard ၏အဓိကသုတေသနစက်ရုံဖြစ်ကြသည်။ ကျောင်းသားများသူတို့က၎င်း၏တဆယ်သန်း volumes ကိုနှင့် 140,000 Serial နှင့်အတူကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ရဲ့စာကြည့်တိုက်အဆောက်အဦ၌ရှိသမျှကိုသုံးနိုင်သည်သောကဆက်ပြောသည်အခွင့်အရေးရှိသည်။
Lehman ၏တတိယအထပ်တွင်မာလ်တီမီဒီယာစီမံကိန်းများကို၏ကျယ်ပြန့ဖန်တီးရှစ်, Mac Pro ကိုစက်နှင့်အတူ Sloate Media Center ကိုဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်, နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနှင့်သမိုင်း: Lehman ခန်းမမှာလည်း Barnard ကောလိပ်ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာဌာနမှသုံးမူလနေရာဖြစ်သည်။
Barnard ကောလိပ်မှာဒိုင်ယာနာရေးစင်တာ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Barnard ကောလိပ်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အဆောက်အဦအဆိုပါဒိုင်ယာနာရေးစင်တာတစ်ခု 98.000 စတုရန်းပေဖွဲ့စည်းပုံမှာပထမဦးဆုံး 2010 ခုနှစ်ဖွင့်လှစ်အဆိုပါအဆောက်အဦးလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုကျယ်ပြန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။
ဤသည်အသစ်သောအဆောက်အဦ Barnard ကောလိပ်မှာကျောင်းသားဘဝကရုံးမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ အရှေ့တိုင်းဆန်, ခေါင်းဆောင်မှုအစီအစဉ်များ, ကျောင်းသားအစိုးရ, ကျောင်းသားကလပ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ, နှင့်ကောလိပ်ကျောင်းရဲ့မတူကွဲပြားမှုအစပျိုးအားလုံးအဆိုပါဒိုင်ယာနာစင်တာဗဟိုပြုနေကြသည်။
အဆောက်အဦးရှိအခြားအဆောက်အဦတစ်ခုကော်ဖီဆိုင်, ကျောင်းသားစတိုးဆိုင်, အနုပညာစတူဒီယို, အနုပညာပြခန်း, နှင့်ကောလိပ်ရဲ့အဓိကကွန်ပျူတာစင်တာပါဝင်သည်။ အဆိုပါဒိုင်ယာနာရေးစင်တာတစ်ခုအောက်ပိုင်းအဆင့်အထိတွင် State-Of-The-Art Glicker-Milstein ပြဇာတ်ရုံ, ထိုပြဇာတ်ရုံဌာနနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်-related ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများကအသုံးပြုမယ့်စွယ်စုံအမဲရောင်သေတ္တာပြဇာတ်ရုံပါပဲ။
Lehman မြက်ခင်းထဲကနေမြင်နိုင်ဘဲ, အဒိုင်ယာနာစင်တာခေါင်မိုးအဆောက်အဦးရဲ့ "အစိမ်းရောင်" ဒီဇိုင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်မိုးတစ်မြက်ခင်းနှင့်ဥယျာဉ်ကုတင်ရှိပြီး, နှင့်အာကာသ Lounge, ပြင်ပသင်တန်းများနှင့်ဂေဟစနစ်လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုသည်။ မြေဆီလွှာအဆောက်အဦး insulates နှင့်အပ်ချုပ်သူ system ထဲကနေမိုးရေကိုစောင့်အဖြစ်ခေါင်မိုးပေါ်တွင်အစိမ်းရောင်အာကာသလည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါဒိုင်ယာနာ Center ကယင်း၏စွမ်းအင်ထိရောက်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ဒီဇိုင်းအတွက် Leeds ရွှေလက်မှတ်ရရှိခဲ့သည်။
Barnard ကောလိပ်မှာ Milbank ခန်းမ
Barnard ကောလိပ်မှာ Milbank ခန်းမ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
ကျောင်းဝင်းသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာ, သင် Milbank ခန်းမလက်လွတ်မနိုင် - ကကျောင်းဝင်း၏တစ်ခုလုံးကိုမြောက်ဘက်အဆုံးလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်။ တက်လိုက်ရှာ, သင်ရုက္ခဗေဒသုတေသနအတွက်အသုံးပြုကြောင်းအထက်အဆင့်တွင်တစ်ဖန်လုံအိမ်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
Milbank ခန်းမ Barnard ရဲ့မူရင်းနှင့်ရှေးအကျဆုံးအဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ 1896 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်, ဒီသမိုင်းဝင် 121.000 စတုရန်းပေအဆောက်အဦး Barnard ရဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာအသက်တာ၏နှလုံးမှာရပ်။ Milbank အတွင်းမှာပဲသင်, မနုဿဗေဒ Africana လေ့လာရေးဌာနကိုရှာဖွေအာရှနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းလေ့လာရေးဂန္တဝင်, Foreigh ဘာသာစကားများကို, သင်္ချာ, ဂီတ, ဒဿနိကဗေဒ, စိတ်ပညာ, ဘာသာရေး, Socialogy နှင့်ပြဇာတ်ရုံပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါပြဇာတ်ရုံဦးစီးဌာနသည်၎င်း၏ညျဘဏ်ဍာအများအပြားအဘို့အ Milbank ၏ပထမဦးဆုံးအထပ်ပေါ်တွင်မိုင်းနား Latham Playhouse အသုံးပြုသည်။
အဆိုပါအဆောက်အဦကိုလည်းတက္ကသိုလ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရုံးများအများအပြားမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့်သမ္မတ, Provost, မှတ်ပုံတင်, Bursar, လေ့လာရေးမဟာဌာနမှူး, ပွငျသငျတနျးအတှကျမဟာဌာနမှူး, ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီများနှင့် Milbank အတွက်အဆင့်လက်ခံရေးများအတွက်ရုံးများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Barnard ကောလိပ်မှာ Altschul ခန်းမ
Barnard ကောလိပ်မှာ Altschul ခန်းမ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Barnard သိပ္ပံအဘို့တိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးလစ်ဘရယ်အနုပညာကောလိပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်, သင်ဇီဝဗေဒ, ဓာတုဗေဒ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ, ရူပဗေဒ, လူအပေါင်းတို့ Altschul ခန်းမထဲမှာမှ neuroscience ၏ဌာနများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
1969 ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်နှင့်ပါရှိသည်မြောက်မြားစွာစာသင်ခန်း, ဓါတ်ခွဲခန်းများနှင့်ဒြေရုံးများအဖြစ် 118.000 စတုရန်းပေရဲတိုက်ကို။ တောင်မှ Non-science major ကမကြာခဏ Altschul လိမ့်မည် - mailroom နှင့်ကျောင်းသားစာတိုက်ပုံးများအားလုံးအောက်ပိုင်းအဆင့်တွင်တည်ရှိသည်။
Barnard ကောလိပ်မှာ Brooks ခန်းမ
Barnard ကောလိပ်မှာ Brooks ခန်းမ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
1907 ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက် Brooks ခန်းမ Barnard မှာပထမဦးဆုံးနေထိုင်ရာခန်းမဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအဆောက်အဦ 125 ပထမဦးဆုံးနှစ်ကျောင်းသားနှင့်အနည်းငယ်လွှဲပြောင်းကျောင်းသားများအားမူလနေရာဖြစ်သည်။ အခန်းအများစုနှစ်ဆ, ခြင်းသည်နှင့် quad ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးချင်းစီကြမ်းပြင်ပေါ်မှာရေချိုးခန်းမျှဝေပါ။ သငျသညျကြမ်းပြင်-အစီအစဉ်ကိုထုတ်စစျဆေးနိုငျ ကဒီမှာ ။ Barnard နေအိမ်သို့ခန်းမအားလုံးအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု, ရေချိုးခန်းသုံးစက်ရုံများ, ဘုံခန်းနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးများနှင့်အသေးစားရေခဲသေတ္တာများအတွက်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။
Brooks ခန်းမ Barnard ရဲ့ကျောင်းဝင်း၏တောင်ဘက်အဆုံးတွင်တည်ရှိသောနှင့်ဝစ်ခန်းမ, ရိဒ်ခန်းမနှင့် Sulzberger ခန်းမနှင့်အတူလူနေအိမ်ကို Quad ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထမင်းစားခန်းခန်းမဝစ်၏မြေအောက်ခန်းထဲမှာဖြစ်တယ်, အားလုံးပထမဦးဆုံး-ကျောင်းသူများ Barnard ရဲ့န့်အသတ်န့်ညက်အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ရန်လိုအပ်သည်။
Barnard မှာအခန်းတစ်ခန်းနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့စျေးပေါသည်မဟုတ်, လူနေမှု၏ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်နယူးယောက်စီးတီးရှိကျောင်းဝင်းချွတ်ညစာစားသည့်အခါက bargain ဖြစ်ပါတယ်။
Barnard ကောလိပ်မှာဝစ်ခန်းမ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
1925 ခုနှစ်ကတည်ဆောက်, ဝစ်ခန်းမ Barnard ကောလိပ်မှာ 215 sophomores, Junior နှင့်ကျကွီးရှယျအိုမြားမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ အများစုမှာခန်းဆိုရင် single ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးချင်းစီကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတစ်ရေချိုးခန်းမျှဝေပါ။ သင်တစ်ဦးကြမ်းပြင်-အစီအစဉ်ကိုတွေ့နိုင်ပါသည် ကဒီမှာ ။ မီးဖိုချောင်နှင့် Lounge ဒေသများယျြ Sulzberger ခန်းမ၌ရှိကြ၏။ အဆိုပါကောလိပ်ရဲ့အဓိကထမင်းစားခန်းခန်းမဝစ်၏မြေအောက်ခန်း၌တည်ရှိ၏။
ဝစ်, Barnard ရဲ့နေထိုင်ရာခန်းမအပေါငျးတို့သကဲ့သို့ပင်ကျောင်းသားများက '' လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်လုံခြုံသေချာစေရန်တစ်ဦးစားပွဲပေါ်မှာလက်ထောက် 24 နာရီတစ်ရက်ရှိပါတယ်။
ဆုံးမစကားစင်တာ, မသန်စွမ်းသူများန်ဆောင်မှုများ, နှင့်အရက်နှင့်ပစ္စည်းပွားရေးအစီအစဉ်: ဝစ်၏ပထမဦးဆုံးအထပ်ပေါင်းများစွာကောလိပ်န်ဆောင်မှုများပေးရန်မူလနေရာဖြစ်သည်။
Barnard ကောလိပ်မှာ Sulzberger ခန်းမများနှင့်မျှော်စင်
Barnard ကောလိပ်မှာ Sulzberger မျှော်စင်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Sulzberger Barnard ကောလိပ်မှာအကြီးဆုံးနေအိမ်သို့ခန်းမဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအနိမ့်ကြမ်းပြင် 304 ဦးပထမဦးဆုံးကျောင်းသူများအားနေအိမ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ရဲတိုက် 124 upperclass အမျိုးသမီးတွေရတာဟာ။
Sulzberger ခန်းမထက်နှစ်ဆနဲ့သုံးဆထေိုအခန်းတက် လုပ်. , တစ်ဦးချင်းစီအထပ်တစ် Lounge, မီးဖိုချောင်နှင့် shared ရေချိုးခန်းရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကြမ်းပြင်-အစီအစဉ်ကိုထုတ်စစျဆေးနိုငျ ကဒီမှာ ။ Sulzberger မျှော်စင်အများစုတစ်ခုတည်းထေိုခန်းရှိပြီးတစ်ခုချင်းစီခန်းမနှစ်ခု Lounge / မီးဖိုချောင်ဒေသများနှင့်တစ်ဦးမျှဝေရေချိုးခန်းရှိပါတယ်။ သငျသညျရဲတိုက်ကြမ်းပြင်-အစီအစဉ်ကိုတွေ့နိုင်ပါသည် ကဒီမှာ ။
2011 ခုနှစ်အဘို့ - 2012 ပညာသင်နှစ်တွင်, တစ်ခုတည်းထေိုအခန်းပေါင်း shared ခန်းထက်ပို $ 1200 ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ Barnard College မှာ Quad အတွက်ဝင်း
အဆိုပါ Barnard College မှာ Quad အတွက်ဝင်း။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Barnard ကောလိပ်ရဲ့လေးခုအဓိကနေထိုင်ရာခန်းမ - ဝစ်, Brooks, Reid နဲ့ Sulzberger - တစ် quaint ရှုခင်းဝင်းဝန်းရံ။ ယင်းအာသာရော့စ်ဝင်း၏ခုံတန်းရှည်များနှင့်ဖီးစားပွဲတစ်ဦးနွေးနေ့လည်ခင်းအပေါ်ဖတ်နေသို့မဟုတ်လေ့လာနေဘို့ပြီးပြည့်စုံအစက်အပြောက်ပါစေ။
အားလုံးပထမဦးဆုံးနှစ်ကျောင်းသားကို Quad မှာနေထိုင်နေစဉ်, ကောလိပ် upperclass ကျောင်းသားများအတွက်အခြားဂုဏ်သတ္တိများပိုင်ဆိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားအဆောက်အအုံများ suite ကိုနေရာချထားခြင်းဖြင့် shared ရေချိုးခန်းနှင့်မီးဖိုချောင်နှင့်အတူ suite ကိုစတိုင်ခန်းရှိသည်။ အနည်းငယ် upperclass Barnard ကျောင်းသားများကိုကိုလံဘီယာနေအိမ်သို့ခန်းမနှင့် sororities တွင်နေထိုင်ကြသည်။ ယေဘုယျအားပထမဦးဆုံးနှစ်ကျောင်းသား 98% နှင့်ကျောင်းသားအားလုံး၏ 90% ကျောင်းဝင်းအိမ်ရာအချို့ကိုပုံစံတွင်နေထိုင်ကြသည်။
ဘရော့ဒ်ဝေးကနေ Barnard ကောလိပ်များ၏ကြည့်ရန်
ဘရော့ဒ်ဝေးကနေ Barnard College မှာ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
အလားအလာ Barnard ကျောင်းသားများကောလိပ်ကျောင်းတစ်စည်ကားမြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်၌တည်ရှိ၏ဆိုတာကိုသတိရသင့်တယ်။ ဓာတ်ပုံအထက်တွင်ဘရော့ဒ်ဝေး၏ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ဘက်ခြမ်းကနေခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံ၏ဗဟိုခုနှစ်တွင် Reid ခန်းမ, ပထမနှစ်ကျောင်းသားနေအိမ်၌ခန်းမတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လက်ဝဲမှ Brooks ခန်းမ 116 အနောက် Street မှာဖြစ်ပြီး, ရိဒ်၏ညာဘက်မှ Sulzberger ခန်းမနှင့် Sulzberger မျှော်စင်ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မန်ဟက်တန်အတွက် Barnard ၏တည်နေရာ Harlem, ရန်လွယ်ကူသောလမ်းလျှောက်အတွင်းကနေရာ နယူးယောက်၏စီးတီးကောလိပ် , Morningside ပန်းခြံ Riverside မှပန်းခြံနှင့်ဗဟိုပန်းခြံ၏မြောက်ဘက်အဆုံး။ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် အဆင့်အနည်းငယ်ကွာသည်။ အဆိုပါမြေအောက်ရထားရုံ Barnard ရဲ့အဓိကမြို့တံခါးတို့ကိုအပြင်ဘက်တွင်ရပ်, ဒါကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများက New York City, အပေါငျးတို့သဆွဲဆောင်မှုဖို့အဆင်သင့်သုံးစွဲနိုင်ရှိသည်။
Barnard ကောလိပ်မှာ Vagelos Alumnae ရေးစင်တာ
Barnard ကောလိပ်မှာ Vagelos Alumnae ရေးစင်တာ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Barnard ကဲ့သို့ဂုဏ်သတင်းကောလိပ်တက်ရောက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများရှည်လျားဘွဲ့ရပြီးနောက်ဆက်လက်။ Barnard 30000 ကျော်အမျိုးသမီးခိုင်မာတဲ့ alumnae ကွန်ယက်ကိုရှိပါတယ်, နှင့်ကောလိပ်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမျက်နှာစာနှစ်ခုစလုံးအပေါ်ဘွဲ့ရချိတ်ဆက်ကူညီပံ့ပိုးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအများအပြားအစီအစဉ်များရှိပါတယ်။ အဆိုပါကောလိပ်ကျောင်းကိုလည်းလမ်းညွှန်နှင့်ကွန်ယက်များအတွက် alumnae လက်ရှိကျောင်းသားများကိုချိတ်ဆက်ဖို့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Barnard ရဲ့ Alumnae အစည်းအရုံး၏စိတ်နှလုံးမှာ Vagelos Alumnae Center ကဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစင်တာကို "Deanery," တခါအိမ်မှာတစ်ဦး Barnard ဒင်းမှဖွစျကွောငျးကိုဝစ်ခန်းမထဲမှာတိုက်ခန်းတစ်ခန်းတွင်တည်ရှိသည်။ အဆိုပါစင်တာ alumnae အစည်းအဝေးများနှင့်လူမှုရေးဖြစ်ရပ်များအတွက်သုံးနိုငျသောဧည့်ခန်းနှင့်ထမင်းစားခန်းရှိပါတယ်။
Barnard ကောလိပ်မှာဧည့်သည်ရေးစင်တာ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
သငျသညျ Barnard College မှာသွားရောက်လိုပါက Broadway အပေါ်အဓိကမြို့တံခါးတို့ကိုလှည့်လည်ထွက်ခွာသွားကိုဖွင့်, သငျ (သင် Sulzberger ခန်းမများနှင့်မျှော်စင်, Barnard ရဲ့နေထိုင်ရာခန်းမနှစ်ခုဖြစ်ရလိမ့်မည်အထက်တွင်) ကို Sulzberger နောက်ဆက်တွဲအတွက်ဧည့်သည် Center မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Tours မှသောကြာနေ့မှတဆင့် 10:30 နှင့် 2:30 တနင်္လာနေ့မှာဧည့်သည် Center ကစွန့်ခွာခြင်းနှင့်တစ်နာရီအကြောင်းကိုယူပါ။ အဆိုပါခရီးစဉ်ပြီးနောက်, သငျသညျ Barnard ရဲ့ဝင်ခွင့်များနှင့်တိုင်ပင်မှူးမတ်တစ်ဦးအားဖြင့်အလွတ်သဘော session တစ်ခုတက်ရောက်ရန်နိုင်ပါတယ်နှင့်ကောလိပ်နှင့်ကျောင်းသားဘဝအကြောင်းကိုလေ့လာပါ။
သင်တစ်ဦးခရီးစဉ်ယူရက်ချိန်းမလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ကခရီးစဉ်ပုံမှန်အချိန်ဇယားအပေါ် operating နေကြသည်သေချာအောင်မှတက်ဖေါ်ပြခြင်းမပြုမီ Barnard ရဲ့အဆင့်လက်ခံရေးပင်မစာမျက်နှာစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
Barnard College မှာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူဖို့, ထုတ်စစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ Barnard College မှာပရိုဖိုင်း နှင့်တရားဝင် Barnard က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု။
UC Irvine ဓာတ်ပုံလှည့်လည်
တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကောလိပ်မှလွှဲပြောင်း၏ Hidden ကုန်ကျစရိတ်
Civil liberties: အိမ်ထောင်ရေးတစ်ဦးညာဘက်လား?
Earl Warren, တရားရုံးချုပ်၏တရားသူကြီးချုပ်
အက္ခရာသင်္ချာအတွက် Equivalent ညီမျှခြင်းကိုနားလည်ခြင်း
ဘာအနီး-မရဏအတွေ့အကြုံ (NDE) စဉ်အတွင်းဖွစျသှား?
တစ်ဦးအပြန်အလှန် Pronoun ကဘာလဲ?
Landscaping: Surface ကသစ်ပင်အမြစ်များ
မာရိုင်ကယ်ရီရဲ့ 18 နံပါတ်-One Hits
Edgar Allan ဖိုး: မရဏ၏တစ်ဦးကဒဿနိကဗေဒ
ငွေရဲ့ Power အကြောင်း 12 ဆွဲဆောင်မှုအထောက်
ဆိုင်းငံ့ 2nd စန္ဒယား Chord
Seiyu ၏အဓိပ္ပာယ်, အင်္ဂလိပ်နှင့်အရေးပါမှု
ဂျေးသူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်, Notorious ဓားပြ Baron
မှော်တူရိယာအားဖြင့် MI ဂစ်တာ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အသံလှိုင်းများအတွက် Doppler Effect
Black ကသမိုင်းလ - အာဖရိကန်အမေရိကန်တီထွင်သူ